Chii chatinogona kushandisa paLinux panzvimbo yeAdobe Creative Cloud | Linux Vakapindwa muropa
Chii chatinogona kushandisa paLinux panzvimbo yeAdobe Creative Cloud
Iyo Adobe Creative Cloud suite ine yayo yega yekuisa yekuisa uye yekuvandudza turu.
Software yepfuma ingatsiviwa neyakavhurika sosi zvigadzirwa? Mune ino posvo tirikuda kupa open open source alternatives to Adobe Creative Cloud
Chokwadi mubvunzo uyo haina kana mhinduro imwe. Tinorevei nekutsiva? Adobe software Iyo ine akawanda mabasa ayo anotendera iwe kuti uite aise mashini. Mabasa asiri kuwanikwa mune sarudzo dzatinokurudzira.
Kune rumwe rutivi, Iwo mapurogiramu atinotaura, achive akavhurwa sosi, anotendera kuti kana tikaziva kuzviita, tinogona kuwedzera mabhenefiti avo.
Ini ndiri wekufunga kuti mafomu atakataura akakosha kana uri mushandisi wemba kana kambani hombe kuti iwe unogona kuhaya vanogadzira. Pane kudaro, sndiri nyanzvi yakazvimiririra chii ndakabatikana kuwana vatengi uye kuzadzisa kwavo kupihwa mabasa iwe unofanirwa kubhadhara rezinesi reAdobe.
1 Mufananidzo Kugadziridza: Iyo Gimp
2 Kugadziridza Vhidhiyo: Openshot
3 Vector mifananidzo yekugadzira: Inkscape
4 Kugadziridza kwemazwi: Audacity
5 Webhusaiti Kugadzira: Firefox Yekuvandudza Dhizaini
6 Vhidhiyo Mhedzisiro Kugadzira: Blender
7 Desktop Zvinyorwa: Scribus
Mufananidzo Kugadziridza: Iyo Gimp
Nezvikonzero zvisina basa ndiri kubhadhara rezinesi reAdobe Creative Cloud iro rinosanganisira Photoshop. Asi pandinofanira kugadzirisa mapikicha ini ndinopedzisira ndotendeukira kuGimp.
Ndicho icho ichi chirongwa chekugadzirisa foto izvo zvinosanganisira zvimwe zvishandiso zvekugadzira chati iri zviri nyore kushandisa. Mamwe maturusi senge chishandiso chekusarudza anogona kunge asina kunyatsoita Photoshop, asi iwe unofanirwa kungoisa moyo murefu uye kushandisa nguva yakawanda kuwana mhedzisiro.
Iyo Gimp inotsigira kushandiswa kwePython zvinyorwa, uye masvomhu mafomati anoshandiswa pakugadzira magiraidhi ari paInternet. Kana iwe uine nguva uye kufarira, haudi proprietary software.
Iyo Gimp inowanikwa mune zvinyorwa zvekuparadzirwa kweLinux uye mune flatpak chitoro.
Kugadziridza Vhidhiyo: Openshot
Adobe yehunyanzvi vhidhiyo mupepeti ndeye Premiere Pro, uye akanakisa dzimwe nzira dzeLinux mapurogiramu maviri akabhadharwa uye asiri akavhurwa sosi; Lightworks uye Da Vinci Resolve. Kunze kweCinelerra zvinoita sekunge pasina sarudzo yemahara. Asi sezvo ini ndaisambokwanisa kunzwisisa mashandiro eCinelerra, ini handigone kuzvikurudzira.
Nekudaro, iyo yazvino yekuvandudza kuCreative Suite inosanganisira a chishandiso chevasina-nyanzvi vhidhiyo edhita; Kutanga kuratidzwa.
Mune ino niche isu tine sarudzo dzinoverengeka, kwekuravira kwangu zvakanakisa zvese ndeye Openshot.
Kuvhura kunokutendera kuti uunze odhiyo, vhidhiyo uye mifananidzo clip uye ubatanidze iwo. Inosanganisira akasiyana mhedzisiro uye shanduko. Yakasanganiswa neBlender uye Inkscape tinogona kugadzira mazita asingagumi yakagadziriswa uye yakagwinya.
Kuvhura kunowanikwa mu flatpak chitoro.
Vector mifananidzo yekugadzira: Inkscape
Kusiyana nemifananidzo inoumbwa nemapikiseli, vector mifananidzo inovakwa uchishandisa mapoinzi, mitsara, uye makakombama anotorwa kubva pamasvomhu equations Izvi zvinoreva kuti chero saizi shanduko haireve kurasikirwa kwemhando.
Kugonesa Illustrator, Adobe yakabayira zvirongwa zviviri zvaidiwa nevakagadzira graphic. Mahara uye Fireworks. Pane chikumbiro chekugadzira yekutanga yakavhurwa sosi, asi zvinoita sekunge paine mikana yakawanda.
Neraki isu tinogona kutarisira Inkscape.
Inkscape kurasa maturusi ekuronga vector mifananidzo, su tumira kune mamwe marudzi emafomati, kupa, XML rutsigiro uye mukana wekugadzira yedu pachedu zvinyorwa mu python.
Inkscape inowanikwa munzvimbo dzekuchengetera makuru ekuparadzirwa kweLinux. Zvakare mumhando Flatpak y Snap.
Kugadziridza kwemazwi: Audacity
Audition, iko kunoshanda kushanda nemafaira odhiyo eCreative Cloud suite haina kuzivikanwa zvakanyanya, zvisinei, kana Adobe achiramba achiisanganisira, imhaka yekuti mumwe munhu anofanira kuishandisa. Seimwe nzira muLinux, nyanzvi dzinowanzo kurudzira Ardor, asi, kunyangwe yakavhurwa sosi, inobhadharwa software.
Pane zvinopesana, Audacity iri muzvivakwa uye muzvitoro zve Snap y Flatpak.
Chirongwa chinotendera rekodhi mhenyu odhiyo kana kushandisa mafaira akachengetwa, ine rutsigiro rwe16-bit, 24-bit uye 32-bit. Vanogona gadzirisa uchishandisa akawanda makwara, shandisa mhedzisiro uye kutumira kunze mumafomati anozivikanwa.
Webhusaiti Kugadzira: Firefox Yekuvandudza Dhizaini
MuAdobe Creative Cloud pane zvirongwa zviviri zvekugadzira mawebhusaiti; Muse uye Dreamweaver. Pakutanga, haufanire kunyora kodhi, yechipiri chishandiso chine hunyanzvi, kunyangwe iine mawedzero-ayo anoderedza kwazvo nguva yekushanda (Vamwe purist vangati pamutengo wekuwedzera kodhi isingadiwe).
Sekutaura kwandakaita chinyorwa chakapfuura YeLinux Vakapindwa muropa, chinhu chepedyo kwazvo chakabhadharwa chinoonekwa chinongedzo chinonzi BlueGriffon Asi, kana tiri kutsvaga yakasununguka sarudzo yatinogona kuyedza nayo Firefox Yekuvandudza Dhizaini.
Vhidhiyo Mhedzisiro Kugadzira: Blender
NaBlender isu tinokwanisa kugadzirisa mavhidhiyo uye nekuwedzera mazita uye 3d mifananidzo
Ndataura pamusoro kuti chikonzero chandakabhadharira rezinesi reAdobe Creative Cloud hachina basa. Zvino kana zvasvika; zvinyorwa.
Zvinyorwa ndicho Achilles chitsitsinho cheakavhurika sosi zvirongwa. Kutsvaga chidzidzo chekuita chimwe chinhu uchishandisa mahara maapplication kazhinji kunonetsa. Pane kudaro, iwe unongofanirwa kutsvaga pfupi paYouTube kuti uwane vhidhiyo dzidziso yekuti ungazviita sei neAdobe zvigadzirwa.
Blender ndiyo inokudzwa kunze kwemutemo uyu. Ehezve, iyo ndeimwe yemashoma emahara uye akavhurwa sosi ekushandisa, kunze kweayo ane hukama negore, maseva, data sainzi kana huchenjeri hwekugadzira hunogona kutora hunyanzvi hwemhando
Iyo purogiramu, pakutanga yakagadzirirwa 3d kududzira, ine zvishandiso zvine simba zvekugadzirisa mavhidhiyo. Aya mashandiro anogona kuwedzerwa ne kuwedzerwa kwemahara uye akabhadharwa makomputa.
Iwe unogona kuwana Blender mune zvinyorwa uye mumafomati Flatpak y Snap.
Desktop Zvinyorwa: Scribus
Scribus inogona kusasanganisira ese anodhinda uye edhijitari ekutsikisa kugona kunoitwa neIndesign, asi inotsigira zvido zvemushandisi wemba zvakanyatsonaka.
Kana tichifanira kugadzira mafaira anodhindwa isu tine iyo akasiyana akasiyana eiyo CMYK color profile.
Muchiitiko chekugadzira zvinyorwa zvemagetsi senge mafomu ewebhu, Scribus anounza zvakafanotaurwa zvadzora.
Unogona kupinza zvinyorwa yakagadzirwa ne LibreOffice y exportr inoshanda mumafomati PDF.
Scribus iri mune zvinyorwa zvekusiyana kwakasiyana kweLinux.
Scribus inokutendera iwe kuti ugadzire anodhinda uye emagetsi zvinyorwa.
Ndiri kusiya nemaune Adobe Reader, iyo, kunyangwe ichiverengerwa muCreative Cloud simaki, haisi chikamu chayo. Iko kuumbwa uye kugadzirisa kwe pdf zvinyorwa zvinokodzera pachayo posvo.
Vamwe vanyori vanotora mazita ezvirongwa vanonyatsoratidza Synfig seimwe nzira yeAdobe Animate. Hazvina kunaka. Adobe Animate ndiye mutsivi weAdobe Flash uye inoitirwa kugadzira yekudyidzana kunyorera.
Iwo mapikicha e3d uye mapurogiramu ekugadzira hunhu anogona kutsiviwa neBlender.
Ndinoda kujekesa izvi; mukana mukuru wezvirongwa zveAdobe zvine chekuita neyakavhurwa sosi shamwari kuti uve nevashandi venguva yakazara yakatsaurirwa kuwedzera mabhenefiti ako. Nenguva yakakwana hapana chinodzivirira GImp kuve iri nani pane Photoshop kana Scribus kupfuura InDesign. Asi nguva inotengwa nemari, uye isu tiri kutaura pamusoro pezvirongwa zvinowanikwa mahara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Chii chatinogona kushandisa paLinux panzvimbo yeAdobe Creative Cloud
Totally zvinoenderana nemaapplication aunokurudzira kunze kweiyo vhidhiyo imwe, pandakangoedza kuita mamwe magungano ekutanga aine openshot uye zvaive zvisingaite, ese aive matambudziko, kunze kwekusanzwisisika uye isingashande nzira yekushanda. Ini ndinofunga kuti nhasi mumwe weakanakisa emahara uye emahara evhidhiyo edhita kdenlive, iyo kana ndikatokwanisa kuita basa rehunyanzvi, ini ndakatofunga kuita akateedzana ezvidzidzo pachishandiswa ichi.
Kwazisai uye nekutenda nechakanaka chinyorwa.
Ini handizive Kdenlive zvakanyanya, asi ndine shamwari dziri mafeni
KRITA https://krita.org/es/ izvo zvevaratidziri, vemifananidzo uye vependi vakunda mamwe ese maturusi uye vanogona kunyanya kutsiva GIMP uye Photoshop.
LATEX uye chero yeayo graphical maficha ekutsikisa, ari LO MAS PRO, zvakatonyanya kupfuura zvigadzirwa zveAdobe https://beebom.com/best-latex-editors/
TEXMAKER http://www.xm1math.net/texmaker/ sekukurudzira kukuru
KOMPOZER uye APTANA - kana iwe uchiziva Chirungu - https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/creacion-de-paginas-web/alternativas-a-dreamweaver/ yewebhu webhu
KDENLIVE yekugadzirisa vhidhiyo, maoko pasi akanakisa panguva ino, kana zvakadaro ndinofunga.
Uye nekuzvipa iko wega kubata kwezvaunoziva - pasina kuongorora izvo zvausingazive kuti ugadzire chinyorwa - ndinofunga kuti mumusoro wenyaya unofanira kuisawo kuti ndezvega - zvangu ... kana chimwe chakadai -
Ichokwadi, handina kutaura nezvaKrita. Ini zvakare handina kutaura nezve Penzura seimwe nzira yeAdobe XD, ndinoedza kusagadzira zvinyorwa zvakanyanyisa.
Hapana munhu anopokana nezvakanaka zveLaTeX, asi chinyorwa chinoreva dzimwe nzira kune zvigadzirwa zveAdobe, uye izvo zvinosanganisira nyore kushandisa. Scribus ine yakadzika yekudzidzira curve kupfuura LaTeX.
Vhidhiyo edhitaina yeLinux yakawanda. Ndakasarudza Shotwell sezvo ndaigona kunge ndakasarudza Kdenlive kana Shoucut kana chero mumwe munhu.
Kana iri Kompozer, haina kuvandudzwa kubvira 2016. Firefox Developer inovandudzwa pamwero wakaenzana neiyo browser.
Izvo "zvatinogona" kushandisa paLinux pachinzvimbo cheAdobe Creative Cloud
Iwe unonyora PODEMOS uye isu hatina kukwanisa, nekudaro conjugate mune zvakakosha kana zvinoratidza uye kwete mune zvingakwanisika.
Kuwedzera zvinoreva kuti zvingangowedzera zvinogona kuwedzerwa, kubva pane yako maonero eiye anonyora chirevo. Kuzvimisikidza pachako kunenge kuri kunyora ADD mukukosha kana kuratidza.
Kuti chinyorwa hachina kukwana nekuti hachijekese kuti ako maonero aunofarira, iwo aunofunga kuti ndiwo epedyo kana akakodzera kana izwi rechiito rinongova zita rekukanganisa kana tsananguro, PASINA ZVIMWE ZVINOKOSHA.
Kuita chinyorwa chechipiri ndichiti LATEX inoshaya mapurogiramu eWYSIWYG FOSS ndiko kusaziva - uye hapana anoziva zvese, ini ndiri wekutanga kusaziva muzvinhu zvakawanda -.
LATEX ine WYSIWYG vapepeti vakadai sevakakurumbira FOSS Lyx kana yakabhadharwa Bakoma.
Mapepanhau, magazini, maprinta, kubvira UNIX nguva, izvozvi zvave kuda kutsakatika, modhi muLATEX (kutsiva lead), ndeye NYANZVI.
Kuti zvishandiso zveFOSS zviripo chikomborero.
Verenga mutengo wemalayisensi ebakoma, anodhura zvakanyanya kupfuura eADOBE, nechikonzero.
Kune angangoita zvese zvehunyanzvi, uye anodhura kwazvo, pane mhinduro dzeFOSS zvirinani kupfuura mhinduro-dzehunyanzvi, idzo mumashanduro avo akabhadharwa dzinodhura zvakanyanya.
Tarisa pamitengo yeAlfresco, USD 48.000, yavo Yemunharaunda Edition ndeyeFOSOS zvachose. Kwete zvese FOSS zviri nani kuitira kuti nharo dzandisina kuita dziiswe mumuromo mangu.
Runyorwa rwakanaka rweimwe nzira iyo, mune yangu kesi, yakashanda kuzvitsiva. Ndanga ndiri mushandisi weiyo Adobe package, kunyanya Illustrator uye Premiere. Kunyanya iyo yekupedzisira, ndichishandisa yangu yega keyboard mapfupi marongero mune yayo CS6 vhezheni. Kukoshesa zvirongwa izvi hakusi nyore nguva dzose, nekuti haasi ese mashandiro avo anogara achishandiswa uye kugona kwavo kwakazara hakuwanzo kuzivikanwa.
Ini ndinofunga iwo mukana wakakura wepakeji yeAdobe havasi vayo venguva yakazara vagadziri Zvakaoma kukwikwidza kurwisa nharaunda yakavhurika pasirese yepasirese. Kubatsira kukuru kwepakeji yeAdobe ndiko kutaurirana kuripo pakati pezvirongwa zveAdobe nemasevhisi, achigadzirwa pasi pemutsara mumwe chete uye, zvakanaka kutaura, kuchinja nenzira ine hutsinye.
Kunyangwe zvakadaro, dzimwe nguva, ini ndinozviwana ndave nemamiriro ezvinhu apo vagadziri venguva yakazara (avo vanofanirwa kunge vari pamubhadharo) vasingagadzirise matambudziko ayo GIMP inogadzirisa nekaviri kudzvanya, kusiyana neiyo inozivikanwa uye inodikanwa Photoshop; kana kuti Blender inopa interface uye maficha (mumaonero angu) kure pamusoro pePremiere, nekugadzirisa vhidhiyo iri yechipiri basa reBlender. Nguva dzose pasina kufungira chokwadi chekuti zvirongwa zveAdobe zvine zvimwe zvinhu zvinopfuura avo vavanovhura sosi makwikwi, hongu.
Ini handisi kumisa software yepamhepo nekure. Ndakashanda naye uye ndinogona kungomukoshesa zvakanaka. Asi kana paine sarudzo dzinovandudza hunyanzvi, hunoshanda uye, pamusoro pezvose, zvinhu zvakanaka, zvakakosha kuti uzviparadzire, nekuti mutsauko mukuru pakati pemahara neyakavanzika software ndevashandi pamubhadharo uye zviwanikwa zvakaiswa nevekupedzisira, asi kwete KUKUDZIRIRA, asi mune MARKETING.
Ndinokutendai nemashoko enyu
Linux Foundation inozivisa OpenJS, mubatanidzwa weNode.js uye JS